Igbo, John: Lesson 032 - Ịgwọ onye ọkpara nke ụlọikpe (Jọn 4:43-54) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 032 (Healing of the court official's son)
C - Mbụ Kraịst gaa Jeruselem (Jọn 2:13 - 4:54) -- IHE: GỊNỊ BỤ EZIOKWU ECHICHE?
5. Ịgwọ onye ọkpara nke ụlọikpe (Jọn 4:43-54)
43 Mb͕e ubọchi abua gasiri O si n'ebe ahu pua, je Galili. 44 N'ihi na Jisus onwe-ya b͕ara àmà na onye-amuma adighi-asọpuru n'obodo-ya. 45 Ya mere mb͕e Ọ biara na Galili, ndi Galili nara Ya, n'ihi na ha huru ihe nile O mere na Jerusalem n'ememe ahu: n'ihi na ha onwe-ha je-kwa-ra oriri ahu. 46Ya mere Jizos biara na Kena nke Galili, ebe O mere miri ka ọ buru manya-vine.
Jizos na ndi náesozo Ya kwusaara Sameria n'ike nke nd ebighiebi naco ha ji kwusaa ozioma. Oge maka iru mba nile abughi; o bu ụzọ merie ndị ajọ mmụọ n'ala nna ya. Ọ gara Galili ozugbo, n'agbanyeghị ịkwa emo ndị Nazaret na ihe ize ndụ nke ime ihe ike. Ndị enyi ya na ndị ikwu ya ekwenyeghi na chi ya, ebe ọ bụ na ọ si n'ezinụlọ dị ala. Ha na-eleba anya n'inwe ego na ihe a ma ama, ma na-eleda ịda ogbenye na Jizọs anya. O nweghị ike ịrụ ọrụ n'etiti ha n'ihi enweghị ntụkwasị obi a.
Akwukwo Kraist dika ndi ngbagwoju anya gbasasiri ebe nile. Akụkọ banyere ọrụ ebube ya rụrụ na Jerusalem gara n'ihu ya gaa Galili. Otutu ndi Galile gara Jerusalem n'oge Ememe ngabiga, ha nuru ma hu ihe nile Jisos mere ma kwuo, ikwusa ozi oma. Ha na-akasi ya obi mgbe o ruru obodo nta nke Galile ma nwee olile anya ihu ya ka o me ihe ebube n'etiti ha ka o wee nweta uru site na ya. Jizọs laghachiri n'ụlọ nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ na Kena ebe obi ụtọ nke agbamakwụkwọ ahụ ghọrọ ụkpụrụ ya. Ọ chọrọ imezu ọrụ ya n'etiti ndị malitere ile anya ya n'ihi ọrụ ebube mbụ ya na Kena.
46 Ma otù nwoke di ike, onye nwa-ya nwoke nāria ọria na Kapanaum. 47 Mb͕e ọ nuru na Jisus esiwo na Judia puta ba na Galili, ọ biakute Ya, riọ Ya ka Ọ ridata, me ka aru di nwa-ya ike; n'ihi na ọ nọ n'ọnu ọnwu. 48 Ya mere Jisus siri ya, Ọ buru na unu ahughi ihe-iriba-ama na ọlu-ebube, unu agaghi-ekwe. 49 Onye-ọb͕a-ọsọ ahu we si ya, Onye-nwe-ayi, ridata tutu nwam anwu. 50 Jisus si ya, Gaa. Nwa-gi nwoke di ndu. Nwoke ahu kwere okwu Jisus gwara ya, o we je. 51 Ma mb͕e ọ nọ nārida ub͕u a, ndi-orù-ya zutere ya, kọrọ ya, si, Nwata-gi di ndu. 52 Ya mere ọ juru ha oge hour nke ọ malitere ibia. Ya mere ha siri ya, Nyahuru n'oge awa nke-asa, aru-ọku ahu rapuru ya. 53 Ya mere nna-ya mara na ọ bu n'oge hour ahu ka Jisus siri ya, Nwa-gi nwoke di ndu. O we kwere, ụlọ. 54 Nka bu kwa ihe-iriba-ama ọzọ nke Jizos mere, mb͕e O siri na Judia puta ba na Galili.
Otù onye isi no 'chichi nke eze bia kwute Jizos mgbe ono nbanyere ya na ikike ya. Ndị obodo obodo ahụ nụrụ banyere ọbịbịa ahụ, ha wee sị, "Ọ na-abịakwute Onye Ngwọta ahụ iji gosi ya eze."
Onye ọrụ a nwere nwa nwoke na-arịa ọrịa na Kapanaum, nke dị n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ. Nna ahụ gbalịrị ọtụtụ ndị dọkịta, na-etinye ego, ma ha achọtaghị ọgwụgwọ maka nwa ya nwoke. Dịka nkwụsị ikpeazụ ọ nwara Jizọs; ọ nwere ike inyere aka ma ọ bụ? Nna ahụ chọrọ ka Jizọs pụọ na Cana wee soro ya gaa Kapanaum, na-enwe olileanya na ọnụnọ ya ga-agwọ nwa ahụ.
Jizos emeghi ka o kelee onye isi a ma O wutere ya na onye ochichi ahu gosiputara okwukwe. Jizos apughi inye aka ma oburu na mmadu n'ekwere n'ezie n'onye ya n'adigh nma. Ọtụtụ na-ekpe ekpere ma kwenye na-enwe obi abụọ n'otu oge ahụ, na-achọ inweta ihe onwunwe. Ezi onye kwere ekwe nime Onyenwe anyi na-adabere n'okwu ya n'enweghi ihe o bula, na-enwe ntukwasi obi tupu enyemaka ahu abia
Ọchịchị ahụ eweghị iwe mgbe Jizọs na-akwagide ya, ma wedara onwe ya ala kpọọ ya "Onye nwe" ma ọ bụ "Onyenwe anyị," nke a dịka Grik, banyere onwe ya dị ka onye na-ejere Kraist ozi. Ịhụnanya o nwere n'ebe nwa ya nwoke nọ na nkwanye ùgwù ya maka Jizọs duuru ya ọzọ ka ọ rịọ Jizọs ka ọ bịa Kapaniọm ka ọ hapụ ndụ ya.
Mgbe nke a gasịrị, Jizọs ghọtara na ọ dị njikere ka onye ọrụ gọọmenti kwere na ọbụbụ ọbụbụeze Ya wee sị, "Gaa, nwa gị ga-adị ndụ." Jizọs jụrụ ịbịa gọọmenti ma gaa Kapaniọm, ma nwaa nna ya n'anya ma mee ka okwukwe ya sie ike. Ndi enye ama enyene mbuọtidem ke Jesus ekeme ndinam idem okposụkedi emi enye esede ke ufọt mmọ ye eyenọwọn̄ emi ọsọn̄ọde?
N'oge mkparịta ụka ahụ, onye ọrụ ahụ chọpụtara àgwà Jizọs na ịhụnanya ya. E mesiri ya obi ike na Jizọs agaghị agha ụgha ma ọ dịghị akwa ya emo. Ugbu a o kwenyere na ọ bụ ezie na ọ pụghị ịgba aka hụ ngwọta nwa ya. O rubere Jizọs isi, ọ laghachiri Kapaniọm. Nkwanye nke nrubeisi ya kwanyere Jizos ùgwù ma kwadoro ogwugwu. Ọ bụrụ na Jizọs nwere ike ịgwọ nwa m nwụrụ anwụ, ọ ka ya karịa. Ọgwụgwọ na-egosi ikike ya na mmalite Chineke. Ụzọ azụ bụ n'onwe ya a ịdọ aka ná ntị na ntụkwasị obi na-eto eto.
Jizọs kpaliri ndị ọrụ ọchịchị ahụ ka ha mee ngwa ngwa gaa gwa ya ka ọ gwọọ nwa ya. Nchegbu ya wee kwụsị, o wee too Jehova. Na-achọsi ike ijide n'aka oge awa ahụ ọkụ ahụ hapụrụ nwa ya nwoke, a gwara ya na ọ bụ nanị mgbe ehihie gasịrị, n'oge ahụ Jizọs kwuchara iwu na nkwa ahụike ahụ.
Onye ọrụ a na-agba àmà nye ezinụlọ ya n'ekele maka ike nke ịhụnanya Kraịst.
Ọrụ ebube a bụ ihe ịrịba ama nke abụọ Jọn dere. Mmetụta Kraịst banyere n'ụlọikpe eze. Ndị mmadụ na-atụsi anya anya n'ọdịnihu na-ekwere na okwukwe na Kraịst bụ ofufe Chineke na-anabata nke na-akwado nke a na ihe ịrịba ama na ọrụ dị ike.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka ọbịbịa gị. Ị gwọrọ nwa nwoke ahụ na-anwụ anwụ na Kapanaum ọ bụ ezie na ọ dịghị anya gị. I mere ka nna ahụ nwee okwukwe siri ike n'ebe ị nọ. Kụziere anyị ịtụkwasị obi na ịhụnanya na ike gị. Anyị na-ekpe ekpere maka nzọpụta nke ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ na mmehie na njehie, ma kwere na ị zara ekpere anyị.
Gịnị bụ oge ntoju nke okwukwe na onye ọrụ ahụ gafere?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)